आधुनिकताले ल्याउँदैछ यति जटिल रोग « Anumodan National Daily
आधुनिकताले ल्याउँदैछ यति जटिल रोग
प्रकाशित मिति : १२ कार्तिक २०७४, आईतवार ११:४०
अहिले हामी जुन रोग एवं समस्याको चर्चा गर्दैछौ, त्यसको स्रोत भनेको हाइ हिल, ल्यापटप, ट्याबलेट, मोबाइल, मोटरसाइकल, गाडी आदि हुन् । जिज्ञासा लाग्न सक्छ, कसरी यसले शारीरिक समस्या निम्त्याएको छ ?
हाम्रो जीवनशैलीको कारण अहिले विभिन्नखाले शारीरिक समस्या देखापर्न थालेको छ । त्यसमध्ये सबैभन्दा बढी सताइने समस्या हो, ब्याक पेन र नेक पेन । अर्थात ढाँड दुख्ने र गर्दन दुख्ने । अर्ररो हुने । यी दुखाई असामान्य बन्दै गएको छ । अहसज बन्दै गएको छ । र, यसले आफ्नो दिनचर्या नै प्रभावित बनाइदिन सक्छ ।
हाइ हिलदेखि ल्यापटपसम्म रोगको स्रोत
अहिले हामी सुविधाभोगी भएका छौ । बढी सौखिन भएका छौ । फेसनेवल भएका छौ । यसैले निम्त्याउने समस्या हुन् यी ।
गाडी, मोटरसाइकल चढ्नेहरु अहिले कम्मर दुखाईबाट ग्रसित हुन थालेका छन् । किनभने उनीहरुले बाइकराइडिङमा, गाडी ड्राइभिङमा जुन पोजिसन लिन्छ, त्यो एकदमै गलत छ । त्यस किसिमको पोजिसनमा लामो समय बस्नु नै समस्याको जड हो ।
गाडीमा, बाइकमा बस्ने सहि पोजिसन छ । खासमा मेरुदण्डलाई सिधा पारेर सिटमा सहज रुपमा बस्नु राम्रो हो । त्यसो भन्दैमा झुक्नु हुँदैन भन्ने होइन । झुक्ने, घोप्टो पर्ने सबै सहि पोजिसनमा गर्नुपर्छ ।
हामी कार्यलयमा पनि लामो समय एउटै कुर्सीमा बस्छौ, एउटै पोजिसनमा । त्यसरी बस्दा हाम्रो मेरुदण्ड लगायत शरीरका भित्री अंगहरुलाई समेत असर पुगिरहेको हुन्छ । झट्ट त्यसको प्रतिक्रिया नदेखिने भएकाले हामीले आफ्नो पोजिसन बदल्दैनौ । तर, समयक्रममा त्यो पोजिसनले हामीलाई समस्या आउन थाल्छ ।
अहिले हाइ हिल लगाउने चलन व्यापक छ । र्फमल वेयरमा हाइ हिल अनिवार्य जस्तै भएको छ । यसले पनि ब्याक पेनको समस्या चाडै निम्त्याउने गरेको छ । अक्सर अहिले धेरैले ल्यापटपमा काम गर्छन् । ल्यापटपमै फिल्म हेर्ने, फोटो, भिडियो हेर्ने, फेसबुक चलाउने गरिन्छ । काखमा ल्यापटप राखेर एउटै पोजिसनमा घन्टौ बस्दा ढाँड, गर्दन दुख्छ । ्
९ बषिर्य बच्चामा पनि समस्या
हामीले भर्खरै उपचार गरेको एउटा बच्चा, जो ९ बर्षकी थिइन् । उनको गर्दन बाङ्गिएको थियो । अर्रर भएको थियो । यतिका कम उमेरमा उनलाई निकै समस्या भएको थियो । गर्दन दुखाईले सामान्य पढलेख गर्न पनि समस्या हुन्छ ।
उनी ट्याबलेटमा फिल्म हेर्ने, गेम खेल्ने गर्दिरहिछन् । घण्टौ निहुरिएर ट्याबलेट चलाउँदा उनलाई समस्या भएको हो । यी बच्ची प्रतिनिधि पात्र हुन् । उनीजस्तै थुप्रै बालबालिका अहिले यस्तै समस्याको शिकार बन्ने संभावना छ ।
९० प्रतिशत नेपालीलाई सहि ढंगले बस्न आउ्रँदैन
बस्नु, हामीलाई एकदमै सामान्य जस्तो लाग्छ । तर, बस्ने सहि पोजिशन छ । अक्सर बस्दा हामी कतै झुकेर, लत्रेर, मोडिएर बस्छौ ।
तर, बस्ता मेरुदण्डलाई एकदम सिधा राखेर बस्नुपर्छ । यसले गर्दा हाम्रो शरीर भित्रको कार्यसंचालन राम्ररी हुन पाउँछ । मुटु, मृगौला, पाचनयन्त्र, फोक्सो सबैले सहज रुपमा काम गर्न पाउँछ । मांशपेसीमा असर पर्दैन । रक्त प्रवाह राम्ररी हुन पाउँछ । यसले गर्दा हामीलाई कुनै समस्या आउँदैन ।
तर, हामी अधिकांश नेपाली अर्थात ९० प्रतिशतलाई बस्न नै आउँदैन । चाहे कार्यलयको कुर्सीमा होस्, चाहे गाडीमा, चाहे बाइकमा । सहि ढंगले बस्न आउँदैन ।
हरेक एक घण्टामा पोजिसन परिवर्तन
हामी कार्यलयमा बसेर काम गर्दा घण्टौ एकै पोजिसनमा बस्छौं, जसले शारीरिक जटिलता ल्याउँछ । कामको धुनमा आफु कुन अवस्थामा बसिएको छ भन्ने हेक्का राखिदैन । यहि भूलले पछि समस्या निम्त्याउँछ । जब समस्या आइसक्छ, त्यसबेला सुधार गर्न निकै समय लाग्छ । उपचारमा समय लाग्छ, पैसा लाग्छ ।
तपाई जहाँसुकै बसेर काम गर्नुहुन्छ, एउटै पोजिसनमा घन्टौ नबस्नुहोस् । बढीमा एक घण्टामा पोजिसन परिवर्तन गर्नुहोस् । यताउता टहल्नुहोस् । रिल्याक्स महसुष गर्नुहोस् । सहज ढंगले काम गर्नुहोस् । यस क्रममा गहिरो सास लिने र छाड्ने उपक्रम दोहोर्‍याइरहनुहोस् । पानी पर्याप्त पिउनुहोस् । पानी पिएपछि पिसाब फेर्नका लागि पनि उठिन्छ ।
काम व्यायाम होइन
‘दिनभर काम गर्छु, व्यायाम भैहाल्छ नि ।’
व्यायाम गर्नुहुन्छ ? भनेर सोधियो भने धेरैले यस्तै जबाफ फर्काउँछन् । भ्रम के छ भने, काम गर्नु वा शारीरिक काम गरेपछि व्यायामको आवश्यक हुँदैन । त्यही व्यायाम हो । यो गलत धारणा हो ।
व्यायाम त्यो व्यवस्थित कर्म हो, जसले शरीरका अंग-प्रत्यंगलाई सहि रुपमा संचालन गराउँछ ।
के गर्ने त अब ?
नसा च्यापिने, हड्डी खिइने, गर्दन अर्ररो हुने, ढाँड दुख्ने समस्याको जड हाम्रो खराब जीवनशैली हो । हाम्रो खराब बसाई, सुताई, काम गराई हो । त्यसैले यसको प्राकृतिक समाधान भनेको जीवनशैली परिवर्तन नै हो । तपाई रोग बोकेर अस्पताल धाउनुहुन्छ, तर जीवनशैली परिवर्तन गर्नुहुन्न भने अस्पताल धाउने क्रम निरन्तर जारी रहन्छ । त्यो कहिल्यै टुंगिदैन ।
त्यसैले कसरी सुत्ने, कसरी बस्ने, कसरी काम गर्ने भन्ने कुरामा ध्यान दिनुपर्छ । घोप्टो नपर्नुहोस्, नझुक्नुहोस्, नखुम्चिनुहोस् भन्न मिल्दैन । तर, कसरी घोप्टो पर्ने, कसरी झुक्ने भन्ने कुरा जान्नुपर्छ ।
२. कुर्सी, गाडीको सिट वा कतैपनि बस्दा हिप र घुँडाको पछाडिको भाग कुर्सीमा मिलेको हुनुपर्छ ।
अहिलेका मान्छेको जीवनशैली मात्र होइन, रोगको प्रकृति पनि बद्लिएको छ । यी रोग विगतमा थिएन । वा हाम्रा पिता-पूर्खालाई नलागेको रोगले हामीलाई गाँजिरहेको छ ।
यसलाई म ‘आधुनिक रोग’ भन्छु । आधुनिकताले निम्त्याएको रोग । सुविधाभोगी भएकाले पैदा भएको रोग ।
(सुस्वास्थ्य अस्पताल बानेश्वरका अध्यक्ष बस्नेतसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित)